Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ enyena ego dị otu nde Naịra dịka onyinye, nyegara ndi otu asọm mpi a jụọ a zaa nke steeti ahụ bụ ndị siri mba Ịndọneshịa bata, na ụmụakwụkwọ abụọ ndị Anambra bụ ndị kachara me nke ọma n'ule 'Common Entrance' n'ala anyị n'ahọ a.
Otu a kpọrọ "Rotary Club International", mpaghara nke 9142, nọrọ n'ụbọchị Tọọzdee wee bute ma nye ụlọ ọba akwụkwọ steeti Anambra onyinye akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche. Nke ahụ bụ nnọọ otu n'ime mbọ ha na-agba iji wee kwalite omenala ịgụ akwụkwọ nyegara ezi ụmụafọ ala anyị.
Ndị e ji okwu ha agba izu n'okpuru ọchịchị Ọgbaru dị na steeti Anambra ekwupụtago n'ebe ọ dara ụda na ha kwụ aka na-achị steeti ahụ bụ Gọvanọ Willie Obianọ n'azụ ma na-enyekwa ya nkwado zuru oke ịchị steeti ahụ nke ugboro abụọ.
Ndị Ụmụeri Emee Mmemee Iri Ji Ọhụụ Ka Ọ Gachara Ahọ Iri Abụọ Na Abụọ
Nke bụ nnukwu oke ọñụ dara nnọọ n'obodo Ụmụeri nke dị n'okpuru ọchịchị 'Anambra East' na steeti Anambra, dịka ụmụafọ obodo ahụ, ndị dị iche iche selitere isi n'ọrụ gọọmenti , ndị enyị, ikwu na ibe nupụtara n'igwe iji wee mee mmemme iri ji ọhụụ nke obodo ahụ nke mbụ na mbụ ya ka ọ gachara ahọ iri abụọ na abụọ.